January 2014 | MAUNG RUPER
zaw hlaing win Android Root, Ebook No comments
http://www.zwmnna.com/2013/03/android-phone-root-root.html — with Kwan Krinna Mon and Htet Naing.
zaw hlaing win computer, Ebook, Photoshop No comments
Photoshop စတင်လေ့လာသူများအတွက် လေ့လာသင်ယူဖို့ နည်းပညာစာအုပ် 10မျိုး
မိုးညိုသား Android Root 1 comment
MMITShare blog နည်းပညာ No comments
Android ပေါ်က လိုအပ်တဲ့ apk တွေကိုပဲ IP ပြောင်းပေးမဲ့ Orbot
တရုတ်တန်း ကောင်းခန်. Android Application No comments
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီပို.စ်လေးကိုတော့ နာမည်ကြီးမြင်ပြီးအထင်မကြီးသွားပါနဲ. ကျွန်တော်တို. ဖုန်းတွေမှာ VPN application တွေ လိုအပ်ချက်တွေအရ အမြဲလိုလိုအသုံးပြုနေကြရပါတယ် ဥပမာ pinger အကောင့် yuilop အကောင့်စတဲ့ apk တွေသုံးကြတဲ့ အခါမှာ code မရောက်တဲ့ပြသနာကျော်လွှားနိုင်ဖို.နဲ. တခြား ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ.အသုံးပြုကြရပါတယ် ဒီလိုအသုံးပြုရတဲ့အခါမျိုးမှာဖုန်းထဲမှာ သုံးနေတဲ့ facebook အကောင့် လို လုံခြုံရေးကောင်းတဲ့ service တွေဟာ attack လုပ်တယ်ထင်ပြီး lock ချပစ်တက်တာကြောင့် VPN တွေသုံးတော့မယ်ဆိုရင် logout လုပ်ပေးထားရပါတယ် အလုပ်ပိုရှုပ်ရပါတယ် ဒီကောင်လေးကတော့ အလုပ်လဲမရှုပ်ပဲ မိမိ proxy ပြောင်းချင်တဲ့ apk ကိုသာရွေးချယ် နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးအဆင် ပြေမယ်ထင်ပါတယ် တကယ်တော့ ဒီကောင်လေးက freeware လေးပါ ဒီလို free proxy တွေတော်တော် များများ ကျွန်တော်သုံးဖူးပါတယ် တချို.က အမှန်တကယ် အလုပ်မလုပ်တာတို. ဖုန်းတိုင်းနဲ.ကိုက်ညီမှုမရှိ တာတို. ကြုံရတက်ပါတယ် ဒီကောင်လေးကတော့ ကျွန်တော်စမ်းသပ်မိသလောက်တော့ အဆင်ပြေပါ တယ် ဒီ Orbot လေးက The Onion Router ဆိုတဲ့ Tor ရဲ.ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် လုံခြုံ မှုအပိုင်း မှာတော့ လှည်.ကြည်.စရာမလိုပါဘူး အပြည်.အစုံကိုလေ့လာချင် ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြား iso လိုမျိုးတွေအတွက်ဒေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ https://www.torproject.org/ မှာဝင်ရောက်လေ့နိုင်ပါ တယ် ကျွန်တော်ကတော့ Android ဖုန်းနဲ. အသုံးပြုပြထားတာကို အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ.လေ့လာနိုင်ပါတယ်
ဖုန်းထဲမှာဒေါင်းယူ အင်စတောချပြီးတာနဲ. ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း အစိမ်းရောင်စက်ရုပ် ပုံစံလေးဟာ Orbot ပါ
စဖွင့်လိုက်တာနဲ. အသုံးပြုမဲ့ဘာသာစကားရွေးခိုင်းပါတယ် ကျွန်တော်က တော့ တခြား ဘာသာတွေမဖတ် တက်တာကြောင့် english ပဲရွေးလိုက်ပါတယ် ဟီးးးး
ပြီးရင်တော့ Next တွေနဲ.ဆက်သွားလိုက်ပါ
ဒီအပိုင်းကိုရောက်ရင်တော့ root user ကို access လုပ်ခိုင်းပါပြီ အပေါ်မှာပြောခဲ့ဖို.မေ့သွားလို.ပါ အသုံးပြုမဲ့ဖုန်းမှာတော့ Root ဖောက်ထားရပါမယ် ၀ိုင်းထားတဲ့နေရာလေးကို နှိပ်ပြီးရင်တော့ next နဲ.ဆက်သွားလိုက်ပါ
ဒီနေရာမှာအရေးကြီးပါတယ် သင့်ဖုန်းထဲက apk တွေအားလုံးကို proxy ကျော်မယ်ဆိုရင်တော့ ၀ိုင်းထားတဲ့ နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးကျော်လိုက်ပါ ကျွန်တော်ကတော့လက်တွေ.ပြထားတာမို. အားလုံးကျော်လိုက်ပါတယ် သင်တို.ကတော့ ဖုန်းထဲမှာ facebook အကောင့်များဖွင့်ထားတာရှိရင် ဒုတိယ မြောက်စာကြောင်းမှာရွေး ချယ်နိုင်ပါတယ် ပြီးသွားရင်တော့ အောက်ကပုံထဲကလို
ရွေးချင်တာ တစ်မျိုးကိုရွေးပြီးရင်တော့ next ပေါ့နော်............. :D
ကျန်တာတွေလဲ next , finish ပေါ့ စလို.ရပါပြီ.................... :P
သင့်ဖက်က အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ရင် အလည်က အ၀ိုင်းလေးကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါ......... ^_^
ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်း စက်ရုပ်လေးက အ၀ါရောင်ပြောင်းသွားပြီး connect လုပ်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတွေတက် နေမှာဖြစ်ပါတယ် 100% ပြည်.သွားရင်တော့ စက်ရုပ်လေးဟာ အစိမ်းရောင်ပြောင်းသွားပြီး လက်ကလေး ဟာမြှောက်သွားပါလိမ့်မယ် ဒါဆိုရင် အိုကေပါပြီ အင်တာနက် connection ပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်ပေးရ တက်ပါတယ် ဒီနေရာမှာ Tor ရဲ.အကြောင်းကြားဖူးသလောက်ပြောရရင် Google ကိုတောင် encrypted လုပ်ပစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Google ကသင့်ဆီက Data တွေနှိက်ယူမှာ မပူပါနဲ့တော့ ......:P ဒါဆိုသင်စိတ်ဝင်စားသွားပြီထင်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားလို. ဒေါင်းချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်တွေထဲက အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ လင့် တစ်ခုထဲမှာသာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ................................................................(မြန်မာပြည်လူငယ်)
မြန်မာပြည်လူငယ်တင်ပြီးသမျှပို.စ်များ Download ဆွဲနည်းမသိပါက ဒီလင့်ကို နှိပ်ပြီးသွားဖတ်ပေးပါ ..
Kaung Khant No comments
application တွေကို တစုတစည်း
တွေ့ ထားသမျှ apk လေးတွေကို
သစ်ထူးလွင် သတင်း blog apk
Planet Myanmar News.apk
Myanmar President Office.apk
Myanmar News info.apk
Aye Chan Mon သတင်း.apk
Myanmar Soccer Reader.apk
Top Soccer Leagues.apk
7Days News Journal.apk
အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့  ကြပါစေဗျာ။
တရုတ်တန်း ကောင်းခန်. Call Recorder No comments
မင်္ဂလာပါဗျာ ကျွန်တော်ဒီနေ.တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ Call Recoder ကောင်းလေးတစ်ခုပါ ဟိုနေ.က ညီမတစ်ယောက် facebook မှာတောင်းထားတာသတိရလို. ဟိုရှာဒီရှာနဲ.ဒီကောင်လေးကိုတွေ.လာတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော် Play Store မှာဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်မှာ သွားဝယ်နိုင်ပါတယ် ............. :P အလကားလိုချင်သူများကတော့ အောက်မှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့လင့်တွေထဲကအဆင်ပြေ မဲ့လင့်တစ်ခုမှာသာဒေါင်းယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်လေးကိုဖုန်းထဲမှာအင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ.ဘယ် ဖက်အပေါ်နားလေးကခလုပ်လေးဖွင့်ပေးမှစတင်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မသုံးချင်တဲ့အချိန်ဆိုလဲပြန်ပိတ် ထားနိုင်ပါတယ်တကယ်ကောင်းလို.တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည်.စေချင်ပါတယ် Android Version 2.1 နဲ.အထက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ..........အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ
Free Anonymous Proxy list 20 Jan 2014
တရုတ်တန်း ကောင်းခန်. No comments
ကြိုပြောထားမယ်နော်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူး ........... :D
1 212.179.18.153 3128 HTTP TP 67% 2014-01-20 16:29
2 109.87.146.108 12682 SOCKS4 HAP 100% 2014-01-20 16:23
3 124.172.221.159 80 HTTP HAP 98% 2014-01-20 16:23
4 88.249.227.98 8080 HTTP TP 100% 2014-01-20 16:20
5 163.18.104.169 1080 SOCKS5 HAP 99% 2014-01-20 16:16
6 50.179.24.189 8118 HTTP HAP 97% 2014-01-20 16:15
7 185.12.46.81 1080 SOCKS5 HAP 100% 2014-01-20 16:08
8 177.136.224.17 8080 HTTPS TP 100% 2014-01-20 16:04
9 172.245.59.203 3127 HTTP HAP 97% 2014-01-20 16:04
10 61.144.48.169 3128 HTTP TP 100% 2014-01-20 16:04
11 202.43.188.120 8080 HTTPS TP 100% 2014-01-20 16:04
12 173.192.117.238 8081 HTTP DP 99% 2014-01-20 16:00
13 201.211.227.92 8080 HTTP TP 99% 2014-01-20 15:59
14 119.15.88.114 8080 HTTPS TP 100% 2014-01-20 15:50
15 180.247.50.202 3128 HTTPS TP 99% 2014-01-20 15:50
16 103.3.79.114 8080 HTTPS TP 100% 2014-01-20 15:50
17 75.187.141.232 8080 HTTPS AP 100% 2014-01-20 15:46
18 88.249.230.31 8080 HTTP TP 89% 2014-01-20 15:45
19 190.19.74.223 44854 SOCKS5 HAP 100% 2014-01-20 15:45
20 41.38.72.122 3128 HTTPS HAP 76% 2014-01-20 15:44
21 24.8.111.134 6474 SOCKS5 HAP 100% 2014-01-20 15:39
22 184.182.240.198 7735 SOCKS5 HAP 100% 2014-01-20 15:34
23 74.3.167.40 8080 HTTP AP 99% 2014-01-20 15:32
24 41.215.37.250 8080 HTTP TP 91% 2014-01-20 15:21
25 203.66.14.174 3128 HTTPS TP 99% 2014-01-20 15:21
26 61.134.38.42 7280 HTTP TP 97% 2014-01-20 15:17
27 210.22.153.130 80 HTTP DP 100% 2014-01-20 15:13
28 200.249.165.179 8080 HTTPS TP 100% 2014-01-20 15:01
29 121.97.70.141 8080 HTTP TP 76% 2014-01-20 15:01
30 49.231.254.35 1080 SOCKS5 HAP 100% 2014-01-20 14:58
31 194.186.76.174 3128 HTTPS AP 100% 2014-01-20 14:54
32 190.248.132.54 8080 HTTP TP 100% 2014-01-20 14:48
Android ပေါ်က လိုအပ်တဲ့ apk တွေကိုပဲ IP ပြောင်းပေးမ...
INSTANT HEART RATE - PRO APK V2.5.8
AVG PC Tune Up 2014 (full version+patch)
IP Hide ဖို့လိုအပ်သူတွေအတွက် Real Hide IP 4.3.6.6 ...
Google Chrome 28.0.1500.72 Full
အစွမ်းထက် USB Security Guard ဖြစ်တဲ့ Smadav Pro 9....
Wifi Protector 1.4.4 Apk
idoo Video Editor Pro 2.8.0 Full Version + Keygen
Platinum Hide IP 3.3.3.6 Full + Patch
Camera22.2.0
GTA SA 64kb Only Hightly Compressed
ImTOO DVD Ripper Ultimate (အတွဲလိုက်ဖြစ်နေသော Vide...
Avira Internet Security 2014 14.0.2.286 full
TuneUp Utilities 2014 14.0.4000.179 Final + keygen...
Next Launcher Theme Crystal 3D 1.0 UP V1.0 Apk
လော့ကျနေသော Facebook အကောင့်ကို ပြန်ယူနည်း ( Pinge...
iOS7Font ထည့်ပြီးသော်လည်း မြန်မာစာမပေါ်သော Device...
Movie Box ထဲက Movie တွေကို ဘယ်လိုရွှေ့မလဲ
အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို မြင့်စေမယ့်ဆော့ဝဲ ( For Roote...
DHCP Problems (Myanmar E-Book)
Facebook v6.0.0.0.18 apk (Last Version) နော်
Android သမားတွေအတွက်next launcher 3d apk
Vroot 1.7.4 ထွက်ပြီ
FileRecovery Pro Enterprise 5.5.4.8 x86/x64 Full +...
Facebook v6.0.0.0.11 APK (Latest Version)
Hide Folders v4.3.7 Final + Crack
Battlefield4PC Game (5Mb) ကွန်ပြူတာဂိမ်း
android အတွက် MX player
PhotoFiltre Studio X 10.8.1 ( ပုံတွေကို အလွယ် Edit...
သင့် ကွန်ပျူတာမှပြောသော error အသံများ...
Jan012014 Battery Booster (Full) v6.9 APK